घरको इन्टरनेट स्लो भयो ? त्यसोभए इन्टरनेटको गति सुपरफास्ट बनाउन यी काम गर्नुस् - Technology Khabar
» घरको इन्टरनेट स्लो भयो ? त्यसोभए इन्टरनेटको गति सुपरफास्ट बनाउन यी काम गर्नुस्
घरको इन्टरनेट स्लो भयो ? त्यसोभए इन्टरनेटको गति सुपरफास्ट बनाउन यी काम गर्नुस्
Technology Khabar १० चैत्र २०७६, सोमबार
कोरोना भाइरसको कारण, धेरै कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न आग्रह गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा, यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तपाईँको घरमा वाइफाइ जडान धेरै राम्रो होस र यसको गति पनि राम्रो चाहनुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई वाई-फाईको गति धिमा छ भन्ने लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई केही तरिका बताउँदैछौं जसले यसको गति निकै बृद्धि हुनेछ।
राउटर सहि स्थानमा राख्नुहोस्
राउटरले वाइ-फाइ स्पीडको गतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यदि यसको स्थिति गलत छ भने, सिग्नल ठिकसँग समातिएन भने स्पीड कम हुन्छ। वास्तवमा, एक वाइफाइ जडानमा सिग्नललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विकिरण मार्फत पठाइन्छ जुन केही वस्तुहरूद्वारा रोकिन्छ र केही वस्तुहरूद्वारा पारित हुन्छ।
उदाहरणको लागी, यदि घरमा इलेक्ट्रोनिक आईटमहरु को नजिकै राउटर जडान छ भने यसको सिग्नल पाउन समस्या हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राउटरलाई इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट टाढा राख्नु राम्रो हुन्छ।
साथै, यसलाई घरको केन्द्रमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् ता कि यसले जताततै राम्रो सिग्नल दिन सकोस्। वा जहाँ बस्नु र काम गर्नुपर्छ त्यहाँ जनिकै लगाउनुहोस् । यदि एन्टेनासहितको राउटर छ भने, यसको एन्टेनालाई माथि पर्नेगरि राख्नुहोस् ताकि यसले संकेत राम्रोसँग समात्न सक्दछ।
अलग एन्टेना जोड्नुहोस्
यदि तपाईंको राउटरले आन्तरिक एन्टेनामा काम गर्दछ भने गति बढाउन, तपाईं बाहिरबाट पनि एन्टेना थप्न सक्नुहुन्छ। बाह्य एन्टेना बजारबाट किन्न सकिन्छ। साथै यो तपाईँ ओम्नीडाइरेक्शनल एन्टेना किन्नुहोस् जसले गर्दा सबै दिशाहरूमा यसको संकेत राम्रोसँग पठाउन सकिन्छ।
वायरलेस रेन्ज एक्सटेण्डर
प्रत्येक वाइफाइ उपकरणको एउटा निश्चित दायरा हुन्छ। यदि तपाईं यसको दायरा बाहिर हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एक ससक्त सिग्नल प्राप्त गर्नुहुन्न र तपाईंको काममा समस्या आउँछ ।
यसको लागि तपाईंले रेन्ज एक्सटेण्डर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।रेन्ज एक्सटेण्डरले राउटरबाट सिग्नल क्याच गरेर टाढासम्म पठाउने सक्छ। रेन्ज एक्सटेण्डरको आएपी एड्रेस फरक हुन्छ र यसलाई सँधै राउटरको नजिक राख्नुपर्दछ ताकि यसले ससक्त सिग्नल प्राप्त गर्न सकोस् ।
वाईफाई राउटर रिबुट गर्नुहोस्
गति बढाउनको लागि, काम सुरू गर्नु अघि तपाईंको वाइफाइ राउटर रिबुट गर्नुहोस्। यो रिबुट हुने बित्तिकै यसको पुरानो मेमोरी खाली हुन्छ र सबै अपडेटहहरू इन्स्टल हुन्छन्।
कसैसँग वाइफाइ पासवर्ड साझेदारी नगर्नुहोस्
अन्तमा, ससक्त वाइफाइ जडानको आनन्द लिने कोशिस गर्नुहोस् र यसको लागि कसैसँग आफ्नो पासवर्ड साझेदारी नगर्नुस् किनभने वाइफाइ धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्दा गति पनि सुस्त हुन्छ। साथै, हरेक छ महिनामा तपाईँको पासवर्ड परिवर्तन गर्न जारी राख्नुहोस् किनकी कसैले यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्दैन।
यी तरिकाले तपाईँले आफ्नो इन्टरनेटको गतिलाई केहि हदसम्म भएपनि बढाउन सकिन्छ ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७६, सोमबार
माघ १४ गतेदेखि क्यान ईन्फोटेक आयोजना हुने
२३ पुष २०७१, बुधबार
पुराना मोडलका आइफोनलाई सुस्त बनाएको आरोपमा एप्पललाई २७ मिलियन डलर जरिवाना